Wiseplay dia tonga amin'ny kinova 2.0 miaraka amin'ny vaovao manan-danja | Vaovao IPhone
Araka ny nasehon'i Miguel namako anao volana vitsivitsy lasa izay, Wiseplay dia fampiharana mamela antsika hilalao fantsom-pahitalavitra maimaim-poana amin'ny fomba hafa noho ny mahazatra, satria teo aloha isika dia tsy maintsy manampy ny lisitry ny lisitra amin'ny fampiharana. Amin'ny maha-multiplatform azy, ho an'ny mpampiasa maro, io no sehatra mety indrindra hankafizany fantsom-pahitalavitra maro izay tsy afaka. Ny olana lehibe amin'ity rindranasa ity dia ny mahita lisitra tena mandeha, satria havaozina tsy tapaka izy ireo.
Amin'ny alàlan'ny Wiseplay, isika dia afaka mahita ireo fantsona maimaim-poana TVE, Antena 3, Telecinco, PDF, Nova ... fa koa azonao atao ihany koa ny mahazo lisitra hankafizanao fantsona karama. Na dia afaka manampy lisitra aza ny filalaovana fantsona fandoavam-bola, ny fampiharana dia manaraka ny fitsipiky ny App Store, satria tsy ampiasaina manokana ho an'io tanjona io.
Wiseplay vao nahazo a Fampivoarana vaovao lehibe miaraka amin'ny fampifanarahana mpampiasa nohatsaraina ankoatry ny fampidirana asa vaovao toy ny safidy hamafana ny tantara an-tsary ny playback, ny fahaizana milalao horonan-tsary tafiditra anaty tranokala, browser iray hilalao horonan-tsary amin'ny endrika HTML 5, ny fahaizana mizara lisitra mampiasa kaody QR ...
Inona no vaovao amin'ny Wiseplay kinova 2.0
Sary famantarana vaovao sy sary.
Kinova Premium vaovao tsy misy doka.
Safidy nampiana hamafana ny tantara an-dalao.
Nanampy azo atao ny milalao horonantsary "embed".
Nanampy FAQ hamahana olana matetika.
Nampiditra Browser hilalao horonan-tsary HTML5.
Fanamarihana vaovao momba ny lisitra vao nampiana.
Anisan'izany ny safidy hanasana namana hampiasa ilay fampiharana amin'ny alàlan'ny Facebook.
Fanatsarana m3u sy w3u nohatsaraina.
Safidy vaovao hamafana ny lisitra rehetra.
Fanatsarana horonantsary m3u8 nohatsaraina.
Fifaneraserana mandeha ho azy amin'ny rohy video.
Safidy vaovao hizarana lisitra amin'ny alàlan'ny QR.
Fanatsarana ny fifandanjana amina endrika video sy mpampiantrano vaovao.
Nahita bibikely kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Wiseplay dia tonga amin'ny kinova 2.0 miaraka amin'ny vaovao manandanja
Raul-bcn dia hoy izy:
Misy mahalala lisitra mety amin'ny Wiseplay ve?!?
Valiny tamin'i Raul-bcn